Facts and Feelings: भारतको बिकास र प्रगतीको रहस्य
त्यो पानीको असमान वितरणको प्रभाव भारतीय भूमीतर्फ अगाडी बढ्दै जाँदा स्पष्ट हुन्छ । नेपालतर्फ कञ्चनपुरको जमीन धेरैजसो उजाड देखेर अगाडि बढेपछि भारततर्फ सिंचाइ प्राप्त भएकोले ठुल्ठुला समथर फाँटहरु हराभरा र सिञ्चित देखिन्छन् । वास्तवमा भारतको आर्थिक वृद्धि त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्र वा कृषि क्षेत्रको विकास नभई सम्भव भएको हैन भन्न करै लाग्दछ । त्यहाँ कृषिको यस्तो आधुनिकीकरण गरिएको छ कि ठुल्ठुला फाँटहरुमा भर्खरै गहुँ भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ, गहुँ काट्नको लागि पनि मेशिनकै प्रयोग भएको छ र भित्र्याउनको लागि थ्रेशरको प्रयोग भएको छ । गहुँका ठुटामा डढेलो लगाएर फेरी अर्को बाली – वर्षे धान लगाउने तयारी भैरहेको छ । यो सबैका लागि खेती प्रणालीको आधुनिकीकरणका साथै उपलब्ध सिंचाइको कारणले पनि सम्भव भएको हो । त्यहाँको खेतहरु हेर्दै अगाडी बढ्दा अर्को रमाइलो पक्ष के देखिन्छ भने फाँटहरुको बिचमा गहुँसँगै सिसौका रुखहरु पनि लगाइएको छ । सम्भवतः ट्रयाक्टर लगाउन कठीन नहोस् भनेर ठाडो र तेस्रो दुवै तर्फबाट बराबर फरकमा लगाइएका रुखहरुले अनौठो दृश्य सिर्जना गर्दछन् । सम्भवतः सिसौले आवश्यक पानी पनि भण्डारण गरिराख्ने र त्यसका पतिङ्गरले मल पनि बनाइराख्ने कारणले यसो गरिएको हुनुपर्दछ । यो दृश्य मेरा लागि बिल्कुलै नौलो थियो ।
अर्को इष्र्या लाग्ने पक्ष भनेको उत्तराखण्डको सार्वजनिक यातायात हो । त्यहाँ सरकारी बस वा रेल उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र दोस्रो विकल्पको रुपमा निजी सवारी रहेका छन् । लोकल बस नै चढे पनि परिचालकले सीटमै आएर नम्रपुर्वक टिकट दिन्छ र पैसा लिन्छ । एक पैसा पनि ठग्दैन । बस चढ्ने यात्रुहरु पनि नेपालका सीमावर्ती भारतीय राज्यहरु बिहार र उत्तर प्रदेशका भन्दा धेरै अनुशासित छन् । ठगीचोरीको समस्या पनि कम छ । अत्यन्त कौतुहल लागेर बसका चालक र परिचालकको तलब सुविधाबारे सोध्न पुग्दा म विश्मित हुन पुगें । सञ्चयकोष, मेडिकल र इन्स्योरेन्स सुविधाबाहेक चालकको मासिक तलब ३० हजार र परिचालकको १२ हजार भारु हुँदो रहेछ । तसर्थ नेपालमा अल्लारे केटाहरुको कब्जामा रहेका सार्वजनिक बसका स्टेयरिङमा त्यहाँ भने पाका र अनुभवी व्यक्तिहरु देखिन्छन् । फलस्वरुप दुर्घटना पनि कम हुन्छन् ।
त्यहाँका सरकारी बस चढेर अगाडी बढ्दै जाँदा नेपालको मृत साझा यातायात सम्झन बाध्य भइन्छ । १० वर्ष अघिसम्म पनि साझा यातायात नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो सार्वजनिक यातायात थियो । नाफामा गइरहेको बस सेवा एकाएक घाटामा गयो । केही मन्त्रीहरु, अथवा उनीहरुका कार्यकर्ताहरुले यातायातमा लगानी गर्र्दै थिए । त्यसको पहिलो पुर्वाधार साझा यातायातलाई डुबाउनु थियो र राज्यका महत्वपुर्ण निकायमा रहेर उनीहरुले अत्यन्त सचेतताका साथ साझा यातायातलाई टाट बनाए र आफ्नो दुनो सोझ्याए । अहिले साझा यातायात इतिहास जस्तै बनेको छ । साझा यातायातका कर्मचारीहरुले पनि त्यसलाई मौन स्वीकृतिमात्र दिएनन्, त्यसका मतियार पनि बने । अहिले उनीहरु घर जलिसकेपछि खरानीको भागवण्डा गरिरहेका होलान् ।
भारतले गरिरहेको आर्थिक वृद्धि र त्यसले अवलम्वन गरिरहेको उदार आर्थिक व्यवस्थालाई प्रशंसा गरेर नथाक्ने बुद्धिजिवी र अर्थशास्त्रीहरुको जमातले भारतले अवलम्वन गरिरहेका केही कल्याणकारी उपायहरुबारे भने चटक्कै बिर्सने गरेका छन् । यी कल्याणकारी योजनाहरु सबै राज्यमा समान छैनन् तर हरेक राज्यमा कुनै न कुनै यस्ता योजनाहरु लागु भएका छन् । त्यहाँ सरकारी संस्थान भारतीय आयल कर्पोरेशनको आधिपत्य रहेको छ भने नेपालमा नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण नगरी भएकै छैन । एअर इण्डिया त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो बायुसेवा हो (त्यहाँ पनि केही निजी कम्पनीहरुको प्रभावमा एअर इण्डियालाई टाट बनाउने प्रयास भइरहेका छन्), हाम्रोमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण नगरी हाम्रा अर्थशास्त्रीहरुलाई भएकै छैन । भारत सरकार स्वामित्वको बिएसएनएल त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो टेलिफोन सेवा प्रदायक हो, हामीकहाँको नाफामा गइरहेको नेपाल टेलिकमलाई त निजीकरणका लागि विदेशी साझेदार खोज्ने प्रयास पनि अगाडि बढिसक्यो ।
वास्तवमा भारतका गाउँहरु डुल्दा थाहा हुन्छ, समाजको तल्लो तहमा रहेका भारतीयहरुको कल्याणका लागि अवलम्वन गरिएका उपायहरु भरतीय अर्थ राजनीतिक व्यवस्थाका मेरुदण्ड हुन् । साथै भारतीय जनताको बिकास, प्रगति र बृहत्तर हितका लागि उसले चालेका कदमहरु पनि विश्मयकारी छन् । नेपालका राजनीतिज्ञ र बुद्धिजिवीहरुमा भएको आफुले केही नगर्ने तर स्थापित कल्याणकारी संस्था र संस्थानहरु भने नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइहाल्ने भन्ने धारणा खोटपुर्ण छ । उदारवादी अर्थव्यवस्थामा बिश्वास गर्नेहरुले समाजवादका राम्रा पक्षहरुबारे उच्चारण नै गर्न नरुचाउने कारणले बास्तवमा नेपालको बिकास हुन नसकेको हो, नपत्याए टाढा जानु पर्दैन, भारतकै केही गाउँ डुले पुग्छ । हामी भारतको आलोचना गर्दागर्दै उ धेरै अगाडी निक्लिसक्यो । कम्तीमा हामीले निकृष्ट पद्धति मानेर घृणा गर्ने गरेको बिहार समेत प्रगतिको बाटोमा यति अगाडी बढ्यो कि केही वर्षमा बिहारीहरुले हामीसँग तुलना गर्दा त्यस्तै घृणा गर्नेछन्, शायद । बिरोध गर्नमात्र जान्ने नेपाली राजनीतिज्ञहरुले भारतले गरेका राम्रा कुराहरुबाट कहिले सिक्न थाल्ने?
Posted by Indra Dhoj Kshetri at 1:10 PM
Alight Group of Consultants P.LTD said...
So Nice to Have you here with your efforts.